Property & Real Estate | Myanmar Business Today
Home Property & Real Estate Page 4
PropertyGuru introduces new categories for its property awards program
The 2020 edition of the PropertyGuru Myanmar Property Awards will introduce new categories to its roster of Development accolades — Best Luxury Condo Development, Best Affordable Condo Development, and Best Affordable Housing Development. New design categories in contention include Best Commercial Architectural Design and Best Commercial Interior Design. In celebration...
Online Real Estate Expo Sells over 120 Units
iMyanmarHouse.com,alocal real estate website, organizedafour-week long online real estate expo-claimed to be the first one in the country-and sold 124 units of real estate when the expo ended. The online expo started on May7and ended on June4receiving interests from buyers. "During the lockdown,...
Ministry to develop 3,000 housing units for retired civil servants
အောက်တွင် မြန်မာလို ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည် Written by Linn Thit The Ministry of Construction said that it will develop 3,000 units on 69.5 acres of land in Nyana Theikdi Quarter, Zambuthiri Township, Naypyidaw, for retired civil servants. The housing project with 3,000 units each having two bedrooms, living room, bathroom, and restroom is planned to...
Myanmar to borrow $20 mln from Korea to build Dala Bridge
အောက်တွင် မြန်မာလို ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည် Written by Linn Thit Pyidaungsu Hluttaw on May 29 session approved to borrow $20 million loans from Korea Exim Bank (EDCF) to complete the construction of Dala Bridge, also called Myanmar-Korea Friendship Bridge, by 2022. While waiting for the loans to receive, the Ministry of Construction will build other...
Myanmar Passes the Industrial Zone Law
အောက်တွင် မြန်မာလို ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည် Pyidaungsu Hluttaw, Myanmar's highest legislature, has approved the highly anticipated comprehensive Industrial Zone Law on May 26. The statue has 20 chapters and 75 articles. The bill was drafted and announced in August 2019. The contribution of the industrial sector to the GDP of Myanmar who heavily relies on...
Construction Development bill sent to parliament
The Ministry of Construction has drafted and sent the Construction Industry Development Bill to the parliament aiming to standardize all the requirements and standards for real estate development. This bill, developed with assistance from KOICA in 2018, also aims to make sure the quality of the buildings is met, which...
Covid-19 ကြောင့် ဆောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍအပေါ်သက်ရောက်မှုများ စာတမ်း ပြုစုမည်
English Tex Below Covid-19 ကြောင့် ဆောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍအပေါ်သက်ရောက်မှုများ ဆန်းစစ်ခြင်း စာတမ်းကို ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ဦးဆောင်ရေးဆွဲသွားမည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပါ စာတမ်းရေးသားရန်အတွက် ဆောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍတွင် လုပ်ကိုင်နေသူထံမှ လိုအပ်သည့်အကြံပြုချက်များကို ဖိတ်ခေါ်ထားကြောင်း သိရသည်။ ယင်းစာတမ်းရေးသားရန် ဆောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍတွင် လုပ်ကိုင်နေသည့် အင်ဂျင်နီယာများ၊ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်သားများ၊ ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီများ၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများအား ထုတ်ပိုးရောင်းချသူ များ ၊ ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် ဆက်စပ်ဘဏ်များနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍနှင့် သက်ဆိုင်သူများသည့် ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ info@construction.gov.mm သို့ အကြံပေးချက်များပေးပို့ ရန်ဖိတ်ခေါ်ထားသည်။ ထိုစာတမ်းတွင် သွင်းအားစုပြတ်တောက်ခြင်း၊ ပြည်တွင်း ပြည်ပမှ ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများ တင်သွင်းမှုအခြေအနေ၊ ဈေးနှုန်အတက်အကျနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်သားရရှိမှုနှင့် စုစည်းနိုင်မှု တို့ကို ဆွေးနွေးအကြံပေးရမည် ဖြစ်သည်။ ယင်းပြင် ဝယ်လိုအားနှင့် ပတ်သက်၍ အိမ်ခြံမြေ တိုက်ခန်းအရောင်းအဝယ်၊...
ပထမဆုံးအကြိမ် အွန်လိုင်းမှ အိမ်ခြံမြေ အရောင်းပြပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်မည်
iMyanmarHouse.com မှ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံး အွန်လိုင်း အိမ်ခြံမြေ အရောင်းပြပွဲကို ၂၀၂၀ ခုနှစ် မေလ (၇) ရက်နေ့မှ မေလ (၂၁) ရက်နေ့အထိ (၂) ပတ်ကြာ ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ပထမဆုံး အွန်လိုင်း အိမ်ခြံမြေအရောင်းပြပွဲတွင် ကရင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့် Steel Stone နှင့် Chit Linn Myaing ကုမ္ပဏီတို့မှ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့် မြဝတီ မြို့သစ်စီမံကိန်းမြေကွက်များကို ရောင်းချသွားမည်ဖြစ်သည်။ "အခုလို ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကပ်ရောဂါဖြစ်နေချိန် အွန်လိုင်းပေါ်ကနေ အိမ်ခြံမြေတွေ အရောင်းအဝယ် ပြုလုပ်လို့ ရအောင် ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ စီမံကိန်းအကြောင်း ပြည့်ပြည့်စုံစုံကို အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ကြည့်နိုင်မယ်။ စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် အွန်လိုင်းကနေပဲ စာရင်းပေးသွင်းပြီး...
တက္ကသိုလ်ဆရာ၊ဆရာမများ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့် နေထိုင်မှုအခက်အခဲများကြုံတွေ့
Covid -19 ကာလတွင် တက္ကသိုလ်မှ ဆရာ၊ ဆရာမများသည် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့် နေထိုင်မှုအခက်အခဲများကို အဓိက ရင်ဆိုင်နေရခြင်းကြောင့် လူမှုဖူလုံရေးဥပဒေပါ ကန့်သတ်ချက်များကိုဖြေလျှော့ပြီး အခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်အတွက် အထူးရန်ပုံငွေထူထောင်ခြင်းနှင့် တက္ကသိုလ်များတွင် အရေးတကြီးလိုအပ်သော အဆောင်၊ အခန်းနှင့် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာများကို နိုင်ငံတော်အစိုးရမှ လျင်မြန်စွာဆောက်လုပ်ပေးရန် တက္ကသိုလ် ဒီဂရီကောလိပ်နှင့် ကောလိပ် ဆရာသမဂ္ဂများကွန်ရက်မှ မေ ၃ ရက်တွင် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။ ယင်းအပြင် တန်ဖိုးသင့်အိမ်ရာဆောက်လုပ်၍ နှစ်ရှည်အရစ်ကျစနစ်ဖြင့် ဝယ်ယူခွင့်ပြုရန် နိုင်ငံတော်အစိုးရကို တိုက်တွန်းထားသည်။ လက်ရှိတွင် ဆရာ၊ ဆရာမများသည် တက္ကသိုလ်ဆေးရုံ၊ဆေးပေးခန်းများမှ မရှိသလောက်နည်းပါးနေခြင်းကြောင့် လုံလောက်သည့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမရခြင်းနှင့် နေထိုင်ရေးခက်ခဲသည် ပြသနာများကြုံတွေ့နေရကြောင်း တက္ကသိုလ် ဒီဂရီကောလိပ်နှင့် ကောလိပ် ဆရာသမဂ္ဂများကွန်ရက်မှ သိရသည်။ ဆရာ၊ဆရာမများ၏ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းမျာ အိမ်ငှားဘဝဖြင့်နေထိုင်နေရပြီး...
(English Text Below) နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ၄ခုနှင့် မြန်မာနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ၁ခု ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ရင်းနှီးမြုပ်နှံခွင့်ပြု ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုလုပ်ကိုင်နိုင်ရန်အတွက် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ၄ခုနှင့် မြန်မာနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ၁ခုကို ဧပြီလ ၂၉ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကော်မတီမှ ခွင့်ပြုခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ နိုင်ငံခြားသားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအနေဖြင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅.၈၂၁သန်း ရင်းနှီးမြုပ်နှံခွင့်ပြုခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအတွက် ကျပ်ငွေ ၁၂၅၅.၀၅သန်း ခွင့်ပြုထားပြီး အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းပေါင်း ၁၉၀၀ဦးအတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ဖန်တီးပေးထားကြောင်း သိရသည်။ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုရန်အတွက် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကော်မတီဥက္ကဌ၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ သစ်တောနှင့် စွမ်းအင်၀န်ကြီး၊ ကရင်တိုင်းရင်းသား လူမျိုးရေးရာ၀န်ကြီးနှင့် တာ၀န်ရှိသူများမှ Video Conferencing ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ဉပဒေနှင့်အညီ ခွင့်ပြုပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း၌...